20.000+ cliparts efu, onyonyo (gif, png, jpg)
Framework maka foto
ClipartsFree.de - cliparts efu, eserese, ihe ngosi gif
Nabata na webụsaịtị anyị! Ọ bụrụ na ị na-achọ foto mara mma na nke efu maka ọrụ okike gị ma ọ bụ ihe omume gị na ụmụaka, mgbe ahụ ị bịarutere ebe kwesịrị ekwesị! Ihe karịrị eserese 20.000 n'efu (ihe nkiri, ihe atụ, ihe ngosi gif, ndebiri, ntuziaka aka aka, akwụkwọ ọrụ na ihe nkuzi) na isiokwu na okwu dị iche iche na-echere gị ugbu a ma chọọ isonye ozugbo enwere ike! :-)
cliparts gị ọ bụ izizi?
Foto niile dị na webụsaịtị a nke akara "© www.ClipartsFree.de" ma ọ bụ "© www.ClipartsFree.de" bụ ndị na-esepụta ihe na ndị na-ese foto anyị. N'ihi ya, ndị a bụ ndị mbụ na iwu. Na akụrụngwa ndị ọzọ na ịntanetị dịka ọmụmaatụ. Dịka ọmụmaatụ, ị gaghị enwe ike ịhụ eserese anyị na webụsaịtị ngwaahịa.
clipart oge okpomọkụ
Mpempe akwụkwọ anwụ
Mpempe akwụkwọ ụlọ akwụkwọ
Kedu otu m ga-esi eji nka clip gị nke ọma n'ọrụ na-abụghị nke azụmahịa?
Mgbe ejiri ya na mgbasa ozi ebipụta, a ga-emerịrị ntụaka (ihe odide ala ala) na isi mmalite (www.clipartsfree.de ma ọ bụ webụsaịtị onye ode akwụkwọ). Enwere ike ịchọta ozi nwebisiinka n'okpuru eserese ọ bụla na nlele nkọwapụta.
Mgbe ejiri ya na ịntanetị, ị nwere ike tinye eserese anyị na ihe nkesa gị ma ọ bụ jiri koodu iji tinye ha ozugbo na ebe nrụọrụ weebụ gị (max. 5 graphics kwa ngalaba). Ekwesịrị idowe njikọ na-arụ ọrụ n'akụkụ eserese ọ bụla na webụsaịtị anyị ma ọ bụ na webụsaịtị onye ode akwụkwọ. Ejighị njirimara rel = "nofollow".
Foto ụbọchị ọmụmụ
clipart ụbọchị ọmụmụ
Nhazi T-uwe elu
Ezi ụbọchị ọmụmụ atụmatụ
Mpempe akwụkwọ maka ụbọchị ọmụmụ
Achọrọ m iji cliparts gị na azụmaahịa. Kedu ihe m kwesịrị ịme?
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na iji azụmahịa, biko zitere anyị email nwere nkọwa zuru ezu nke ọrụ gị:
Kedu cliparts ga-amasị gị iji?
Nkọwa nkenke maka ọrụ gị,
Ọnụọgụ nke nnomi, nkesa, wdg.
Ị nwere ike ịchọta nkọwa ndị ọzọ na nke a na akụkọ "Zụrụ cliparts - Otu esi enweta ikike iji maka eserese anyị".
Kedu ogo nke cliparts gị?
Eserese niile dị na mkpebi nke opekata mpe 600x600 px. dị n'ụdị PNG dị elu ma ọ bụ dị ka GIF animation ma ọ bụ JPEG. Enwere ike imeghe eserese, dezie ma bipụta ya n'ụzọ dị mma na ụlọ ọrụ nkịtị na mmemme eserese.
N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, ụkpụrụ ịdị mma maka ihe onyonyo na ịntanetị na-etolite ngwa ngwa. N'ihi ya, anyị na-etinyekwa nnukwu mkpa na ịdịmma nke eserese anyị ma tinyekwa njirisi ịdịmma anyị dị ka isiokwu, ụdị eserese, mkpebi mgbe etinyere na gallery elu.
Mana tupu ịmalite, anyị ga-agwa gị ka ị gụọ nke ọma ederede na-esonụ. Kwa ọnwa anyị na-enweta ọtụtụ narị ozi na ajụjụ gbasara iji ihe onyonyo anyị. Ụmụ akwụkwọ, ụmụ akwụkwọ, ndị nkụzi, ndị nkụzi, ndị ọchụnta ego, ndị omenkà na ndị mmadụ na-edegara anyị akwụkwọ ma jụọ "... enwere m ike iji foto gị?", "... foto gị ọ bụ n'efu?", "... gịnị ga-eme ma ọ bụrụ na .?" wdg .. Iji zaa ọtụtụ ajụjụ ndị a ma chekwaa oge gị, anyị akwadola isiokwu na-esonụ na ọnọdụ "ajụjụ-azịza" maka gị. Ọ bụrụ na ị nwetaghị azịza ajụjụ gị ebe a, biko degara anyị akwụkwọ ozi. Enwere ike ịchọta nkọwa kọntaktị na akara.
Ma ugbu a, anyị na-amalite.
Kedu ihe "Cliparts efu" pụtara? Foto gị ọ bụ n'efu n'ezie?
Eserese niile dị na webụsaịtị a bụ n'efu ma ọ bụrụhaala na ejiri ya maka ebumnuche na-abụghị nke azụmahịa (dịka ọmụmaatụ: ihe eji eme ihe na nzuzo, imepụta akwụkwọ ịkpọ òkù ụbọchị ọmụmụ, kaadị ekele, akwụkwọ na ihe maka nkuzi n'ụlọ akwụkwọ steeti ma ọ bụ na ụlọ akwụkwọ ọta akara steeti, wdg).
Eji ya n'ụlọ akwụkwọ nkeonwe ma ọ bụ na ngosi ụlọ ọrụ bụ ụgwọ ọzọ.
Ya mere, anyị bịarutere ajụjụ na-esonụ.
Kedu ihe ebumnuche azụmahịa pụtara?
Eji ọ bụla maka uru dị ka: iji na-ebipụta na internet media na a azụmahịa agwa, mgbasa ozi, graphic ụlọ ọrụ ma ọ bụ ngwaahịa weebụsaịtị, nzuzo nkuzi ma ọ bụ nkuzi na onwe ụlọ akwụkwọ / na nzuzo ụmụaka ụlọ, na-eji maka ihe ọ bụla azụmahịa nzube, wdg N'ọnọdụ ndị a, kwekọrọ ekwekọ ụgwọ. ga-akwụ ụgwọ.
clipart egwuregwu oyi
clipart ụlọ mgbatị ahụ
Kedu ihe na-eri iji cliparts gị?
Ọnụ ahịa na-amalite na net / eserese 2 EUR maka iji otu oge wee dị iche dabere na oke ojiji.
Ọ ga-amasị m iji cliparts gị chepụta akara ngosi. E kwere ka m mee nke ahụ?
Iji zere ndakọrịta iwu nwere ike ime, anyị na-akọwapụta n'ụzọ doro anya na enyeghị ikike iji onyonyo anyị (mkpọchị, ihe atụ, animation gif, ndebiri, akwụkwọ ọrụ) dị ka akara ma ọ bụ dịka akụkụ nke ụghalaahịa (ihe ngosi akara).
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịmepụta akara ngosi ụlọ ọrụ, biko gaa na webụsaịtị anyị www.cartoon-design.com. Anyị na-enye ọrụ dịgasị iche iche na-elekwasị anya na nhazi eserese na akara ngosi.
Kedu otu m ga-esi budata nka clip gị na mkpebi dị elu?
Enwere akara ngosi nwere iko na-ebuli elu n'okpuru eserese eserese ọ bụla . Mgbe ị pịrị akara ngosi ahụ, taabụ ọhụrụ ma ọ bụ mpio ọhụrụ (dabere na ntọala ihe nchọgharị gị) ga-eji eserese dị iche iche na mkpebi kacha dịnụ. Wee pịa bọtịnụ òké aka nri, mepee menu mmapụta wee họrọ nhọrọ "Chekwa eserese dị ka ...". Nke a pụtara na enwere ike ibudata ma chekwaa eserese obere vidiyo na mpaghara gị na kọmputa gị. Site n'ebe ahụ ị nwere ike imepe ya na mmemme eserese nkịtị (Paint, Photoshop, PowerPoint wdg) wee dezie ya nke ọma.
Lee Freundlichen Grüßen
Ndị otu Cliparts Free
Onyonyo nka clip ama ama
Foto katoon siri nri
Ihe onyonyo nka clip ọgwụ
Onyonyo nka mkpachị Castle
Onyonyo mkpakọ akụkọ ifo